Baby Magic Creamy Baby Oil (Sweet Baby Rose) 266ml - White | Buy online | SHOP.COM.MM
Baby Magic Creamy Baby Oil (Sweet Baby Rose) 266ml - White
ဗီတာမင် အေ၊အီး၊ ဒီ တို့နှင့်ရှားစောင်းလက်ပတ်တို့ဖြင့် ဖော်စပ်ထားခြင်း
Baby magic က ကလေး ပစ္စည်းတွေက ကွာလတီ စိတ်ချရတော့ ကလေး အသားရည်ကို ထိခိုက်တာကို စိုးရိမ်စရာမလိုပဲ စိတ်ချလက်ချသုံးပါတယ်။ Read more Hide
The best of Baby Magic Creamy Baby Oil
ကလေးလေးတွေအတွက်အကြိုက်ဆုံးကတော့ Baby magic ပဲလေ.. Read more Hide
May Khaing Oo
Baby Magic ပစ္စည်းလေးတွေကို အရည်အသွေးကောင်းလို့ ကလေးမွေးနေ့တွေအတွက် အမြဲလက်ဆောင်ဝယ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ Read more Hide
Baby Magic Baby Oil
ခုဆို အိမ်ကအမွှာနှစ်ယောက်ရဲ့ အသားအရေအတွက် ပူစရာမလိုတော့ဘူး။ အနံ့လေးလဲအရမ်းကောင်းတယ်။ တခြား side effect လဲမရှိဘူးလေ။ Read more Hide
Extra sensitive and dry skin needs extra moisturizing with Baby Magic Creamy Baby Oil. This unique blend of oil and lotion helps to soften and seal in the natural moisture of your baby’s skin, and is gentle enough for even the most delicate skin. This product can be used safely during five years from manufacturing date.
Specifications of Creamy Baby Oil (Sweet Baby Rose) 266ml - White